FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA ANY LAIZHOU HONG - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika any Laizhou Hong
Laizhou Hong - Nahazoana lalana avy amin'ny Kennel an'ny rambony
Ny Laizhou Hong dia alika goavambe. Ny vatan'ny alika dia lava noho ny hahavony amin'ny malazo. Ny lohan'izy ireo dia hozatra, matanjaka ary mitovy amin'ny ambin'ny vatana. Izy ireo dia manana karandoha tena voatonona miaraka amin'ny orona lava kokoa izay lava raha lava ny tampon'ny lohan'izy ireo. Ny handrina dia fisaka ary mifanitsy amin'ny tetezan'ny orona. Mijanona izy ireo, izay ifandraisan'ny faran'ny orony amin'ny handriny, voafaritra. Irony alika ireny dia manana orona malalaka sy mainty ary vavorona. Mahitsy sy lava ny tetezana orony sy ny vavony ary manana molotra mifanaraka tsara amin'ny valanoranony ry zareo. Ny mazinina dia mety ho maizina ary mety misy pentina mainty koa eo amin'ny lelany. Manana valanoranom-bolo mahery vaika izy ireo miaraka amin'ny kaikitry ny hety. Na dia mafy loha aza dia voafaritra kely ihany ny hozatry ny takolany. Ity karazana ity dia manana maso miendrika almond izay voafaritra sy fantatra fa manana endrika marani-tsaina. Ny lokon'ny mason'izy ireo dia mety ho karazana hazondamosina mavo ary volontany mainty. Ny sofin'izy ireo malalaka sy lava dia mijoro mahitsy ary somary miolakolaka amin'ny tendrony. Manana vozona malalaka izy ireo miaraka amin'ny hoditra akaiky mifanentana amin'ny vatany sy ny lohany. Nolazain'izy ireo fa malazo ny vozony mifanena amin'ny lamosiny mahitsy, ka nahatonga azy ireo ho mailaka toy izany. Ny croup misy azy ireo dia lava salantsalany ary boribory raha mbola malalaka. Tonga hatreny amin'ny kiho ny tratran'izy ireo, manome azy ireo ho endrika lehibe kokoa noho ny hozatra. Ny halalin'ny tratran'izy ireo dia antsasaky ny hahavony amin'ny malazo. Ny taolan-tehezan'alika dia manitatra saika hatramin'ny farany ary ny rambony dia lava kokoa ny halavany, mahatratra ny hock, na ny kitrokeliny. Izy io koa dia hatevin'ny mpanelanelana amin'ny farany. Eo amin'ny rambony dia misy volo toy ny volom-borona ary mihantona miaraka amin'ny fiolahana kely amin'ny toerany fitsaharana ny rambony. Manana tongotra mahitsy izy ireo izay voafaritra tsara amin'ny zoro rehetra. Ahemotra ny sorok'izy ireo, matevina ny feny ambony ary manakaiky ny vatany ny kiho mba ho bika tarehy. Nofonosin-tongony teo aloha izy ireo ary mainty ny hoho. Ny tongotr'izy ireo koa dia mahitsy, voafaritra tsara ary hozatra. Manana hoditra miraikitra amin'ny volo fohy izy ireo izay matevina, malama ary marevaka. Ny palitaon'izy ireo dia mainty misy marika mena mavo eo amin'ny mononony, tendany, takolany, tongony ary tratrany. Manana marika eo amin'ny masony sy eo ambanin'ny rambony koa izy ireo.
Ny Laizhou Hong dia fantatra fa tony be, be fitiavana ary sariaka amin'ny olona rehetra. Vondrona tsy mivadika izy ireo ary te hampifaly ny fianakaviany. Tian'izy ireo koa ny miasa ary matanjaka sy matanjaka. Laizhou dia fantatra fa mahaleo tena, matoky tena ary mahay mifanaraka tsara amin'ny tontolo vaovao. Izy ireo dia ampiasaina ho alika miasa, alika mpiambina ary alika mpiara-miasa.
Haavony: Lehilahy: 25—31 santimetatra (64—79cm)
Vehivavy: 25—27 santimetatra (64—70 cm)
Hanao tsara amin'ny trano iray raha toa ka ampiharina tsara, fa ny tsara indrindra amin'ny tokotany salantsalany farafaharatsiny.
Ny Laizhou Hong dia mazoto be, manana tanjaka lehibe. Mila entina mandeha an-tongotra mandritra ny andro na lavitra na mihazakazaka izy ireo, ary mila atao ombelahin-tongony na eo ambadiky ny olona mitazona ny fitarihana, satria ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ary ny mpitondra dia tokony ho ny olombelona.
4—6 alika kely
I Laizhou Hongs dia mila fikolokoloana kely ary mpantsaka antonony.
sary terrier fotsy any andrefana
Tamin'ny taonjato faha-19, ny faritanin'i Shandong ary koa ny faritra hafa ao Shina dia nanjanaka ny miaramila alemanina. Alika niasa toy ny Mpiandry Alemanina , Rottweiler , Great Dane , ary ny Shandong Xian Hound. Taorian'ny taona maro niarahan'ireo alika ireo, dia natsangana ho toy ny zanany manokana ny Laizhou Hong.
Alikakely Laizhou Hong - Nahazoana lalana avy amin'ny Kennel an'ny rambon'ny bararata
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Laizhou Hong
alika kely volontsôkôlà sy tan chihuahua
mpiandry alemanina 3 taona
olde anglisy bulldog mastiff mix
mainty sy fotsy ny poodle mahazatra